PR8 वेब स्रोतहरु बाट कसरि backlinks तपाईंको साइट एसईओ को प्रभावित गर्न सक्छन्?
इनबाउन्ड लिंकहरू वेबसाइटहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कारक हुन्. यदि तपाइँ वेबसाइट ट्राफिक र रैंकिङ स्थानहरू बढाउन चाहनुहुन्छ भने, यो गर्न को लागि सबै भन्दा राम्रो तरिका PR 8 ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न हो. त्यहाँ धेरै उच्च प्रामाणिक वेब स्रोतहरू छन् जुन तपाईले गुणवत्ता डाइफाइ पछाडि पछाडि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. यद्यपि, सबै वेबमास्टर्सहरू यी स्रोतहरूबाट ब्याकलिङ्क कसरी प्राप्त गर्न जान्दछन् र सोच्नुहोस् कि यो सम्भव छैन वा महँगो - imagens para sites profissionais.
यस आलेखमा, हामी Google स्वामित्वको वेब स्रोतहरू र प्लेटफर्महरू जस्तै Google+, र अन्य उच्च PR ब्याङ्कलिङ्क प्राप्त गर्ने तरिकाहरू छलफल गर्नेछौं।. हामी तपाईंलाई देखाउनेछौँ कि यो Google बाट ब्याकलिङ्क प्राप्त गर्न एकदम सजिलो र निःशुल्क छ. त्यसैले हामीलाई सुरू गरौं!
Google Drive बाट PageRank 8 कसरी ब्याकलिङ्कहरू बनाउनुहुन्छ?
निम्न चरणहरूले तपाईंलाई Google बाट सान्दर्भिक र गुणस्तर बाह्य लिंकहरू प्राप्त गर्न र तपाईंको डोमेन प्राधिकरणलाई बढावा दिन मद्दत गर्नेछ. साथै, यी ब्याकलिङ्कहरूले तपाईंको साइट पेजरङ्क बढाउन र तपाईंको पेजहरूमा कार्बनिक ट्राफिक बढाउन मद्दत गर्नेछ.
तपाईंको जीमेल खातामा लग इन गर्नुहोस् वा यदि तपाईसँग अझै पनि छैन भने, जीमेल लगइन विवरण सिर्जना गर्नुहोस्.
आफ्नो जीमेल खोल्नुहोस् र "मेरो ड्राइभ" खण्डमा क्लिक गर्नुहोस्.
Google ड्राइभमा नयाँ फोल्डर सिर्जना गर्नुहोस्. तपाइँ फोल्डरमा कुनै पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ.
पछि नैप्याडमा एचटीएमएल फाइल सिर्जना गरेपछि. यहाँ तपाईंले प्रासंगिक एङ्कर पाठमा तपाइँको साइट लिङ्क सम्मिलित गर्नुपर्छ. यो कार्य पूरा गर्नको लागि, तपाईंलाई आफ्नो ब्लग वा साइट यूआरएलको साथ विशेष एचटीएमएल कोड प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ.
आफ्नो वेबसाइटमा नि: शुल्क ब्याकलिङ्कहरू
जब कोड सकियो, तपाईलाई यो फोल्डर बनाउन र Google बटहरूमा दृश्यात्मक बनाउन आवश्यक छ।. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो वेबसाइट लिङ्कको साथ ड्याफ ट्याग प्रयोग गर्नुहोला. त्यसपछि "साझेदारी" बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो फाइल सार्वजनिक रूपमा साझेदारी गर्नुहोस्.
साझेदारी सेटिङ खोल्नुहोस् र "वेबमा सार्वजनिक" विकल्प छान्नुहोस्. तपाईंको फाइल अब सबैको लागि खुला छ.
फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस् र "विवरणहरू र गतिविधि" बटन चयन गर्नुहोस्.
दाँया-दाँया तिर, तपाइँ "विवरणहरू" सेक्सन देख्नुहुनेछ. तपाइँको लिङ्क त्यहाँ प्रतिलिपि गर्नुहोस्.
नयाँ ब्राउजर खोल्नुहोस् तपाईंको ब्राउजरमा र प्रतिलिपि गरिएको URL टाँस्नुहोस्.
त्यहाँ तपाईंको फाइल नाम सम्मिलित गर्नुहोस् र प्रविष्ट गर्नुहोस्.
नतिजाको रूपमा, तपाइँले आवश्यक पृष्ठको पालन गर्नका लागि backlinks को साथ अवलोकन गर्नुहुनेछ.
PageRank को कसरि बनाउन को लागी 8 Google प्लस देखि ब्याकलिंकहरु लाई दोहोरो?
Google Plus सोशल मिडिया प्लेटफर्म हो जुन Google द्वारा स्वामित्व गरिएको छ जुन एसईओ विशेषज्ञहरूको लागि अविश्वसनीय अवसर प्रदान गर्दछ जुन केहि गुणवत्ता dofollow ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्नका लागि छ।. तपाईं PR8 dofollow ब्याकलिङ्कहरू को बारे मा खण्ड र स्टोरी भाग को बारे मा बना सकते हो. यसबाहेक, तपाईं आफ्नो एङ्कर पाठ प्रयोग गरेर पृष्ठ र प्रोफाइल दुवै लिङ्कहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ. तपाइँलाई आवश्यक सबै कुरा माथि उल्लिखित खण्डहरुमा आफु बारे जानकारी भर्न र तपाईको साइटमा dofollow backlink हरू राख्नु हो.
PageRank 8 कसरी बनाउने? विकिपीडियाबाट ब्याकलिङ्कहरू लाईफ गर्नुहोस्?
तपाईको साइट वा ब्लगबाट एक मूल्यवान सामग्री टुक्रा विकिपीडियाको स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. तपाईंको विशेषज्ञताको खोजी खोजी गरेर, सम्बन्धित विषयमा थप र अख्तियारको उद्धरणले तपाईंको वेब स्रोतमा धेरै उच्च गुणस्तर PR10 ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्नेछ।.